“နွား”သရမ်းကြီးလွတ်နေပြီ(သို့မဟုတ်)ရခိုင်ပဋိပက္ခ အစီရင်ခံစာမထွက်မီ အာရုံပြောင်းသလား … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
“နွား”သရမ်းကြီးလွတ်နေပြီ(သို့မဟုတ်)ရခိုင်ပဋိပက္ခ အစီရင်ခံစာမထွက်မီ အာရုံပြောင်းသလား …
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်က နီးကပ် လာပေပြီ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့သည့် “ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်” က နောက်ဆုံး အစီရင် ခံစာကို တင်သွင်း တော့မည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာ တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နွားကု ဆရာ အေးမောင် တို့ကို ကော်မရှင် ထဲထည့် ထားသည့် အပြင် “တိုင်း ရင်းသား ဖြစ်နေ လို့ပါ”၊ “ဒီမိုက ရေစီ အပြောင်း အလဲ လုပ်ခါစ မို့လို့ပါ” ဆိုပြီး ၎င်းနွားကု ဆရာ အေးမောင် တို့ကို ကြမ်းချင် တိုင်းကြမ်း ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းခွင့် ပေးပြီး အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင် နေသဖြင့် အစီရင် ခံစာသည် ဘက်လိုက်မှု ကင်းဖွယ် မရှိပါ။ လူသတ် သမားကို ဂျူရီ လူကြီး လုပ်ခွင့် ပေးသဖြင့် အမှု မှန် ပေါ်ပေါက်ရန် ခဲယဉ်းမည် ဖြစ်သည်။
အာရ်ကန် (ခ) ရခိုင် ပြည်နယ် တွင်လူများစု ရခိုင်များတွင် အစွန်းရောက်သူ အချို့သည် လူစိတ် ပျောက်၍ အဟိတ် တိရစ္ဆာန် စိတ်ပေါက် နေသည်။ လူသာမက ဘုန်းကြီး အချို့ ပင်လျှင် သင်္ဃန်း ခါးတောင်း ကျိုက်ပြီး ရမ်းကား နေကြပြီ။ ယာခင်း ထဲသို့ နွားအုပ် ၀င်၍ ဖျက်သည့် ပမာ ရခိုင် အကြမ်းဖက် များက ရခိုင် ပြည်ကြီး၏ အလှကို နင်းချေ ဖျက်ဆီး လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါ ရခိုင်အကြမ်းဖက်များကရခိုင်ပြည်နယ် ကိုကျော်၍ မြန်မာ ပြည်မ နှင့်အခြား ပြည်နယ်များ သို့ပင် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မုန်းတီးမှု များကို တင် ပို့ ဖြန့်ချီလျက် ရှိသည်။
ရခိုင် နွားကု ဆရာ အေးမောင် ဆိုသူက ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရခိုင် တိုင်းရင်း သားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ (ရတပ ၊ RNDP) ကိုထည်ထောင် သည့်အချိန် မှစ၍ ရခိုင် ဒေသကို မင်းမဲ့ဒေသ တစ်ခု အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ပစ်ခဲ့သည်။ “ရခိုင် ပြည်နယ် သည် ရခိုင် လူမျိုး အတွက်သာ ဖြစ်ရမည်”၊ “ရတပကို မဲမထည့် သူသည် ရခိုင် လူမျိုးနှင့် ရခိုင် ပြည်နယ်ကို သစ္စာ ဖေါက်သူ ဖြစ်သည်”၊ “ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ကုလား ကင်း ရှင်း စေရမည်” စသော အစွန်းရောက် လှုံ့ဆော် ကြွေးကြော်သံ များဖြင့် “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သို့ ၀င်ရောက် ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွင် “လူမျိုး၊ ဘာသာ” ကိုအသုံးချ၍ မဲမဆွယ်ရဟု အတိ အ လင်း ပြဌာန်း ထားသော်လည်း “ရတပ” အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် များက ရှိသမျှ ဥပဒေ များ ကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း တက်နင်း ချိုးဖောက် ခဲ့သည်။ ဗိုလ်သိန်းစိန်၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က လည်း မည်သို့မျှ အရေးမယူ၊ ဤအတိုင်း လွှတ်ထား ခဲ့သည်။ သို့နှင့် “အဖ ရခိုင် နိုင်ငံတော် ကြီး” လွတ်မြောက်ရေး၊ ကုလား ကင်းရှင်းရေးကို လှမ်းမျှော်ပြီး ရခိုင် အစွန်းရောက် များက ရတပ နလပိန်းတုံး များကို မဲထည့် လိုက်ကြ တော့သည်။ ရတပ ကဥပဒေ ချိုးဖောက်ပြီး အနိုင် ရသည်ကို အောင်မြင်စွာ ကန့်ကွက် နိုင်ခဲ့သော ပေါက်တော မြို့နယ်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းသုံးဦး ကိုကော်မ ရှင်က ပထမ အနိုင် ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် နွားကု ဆရာ အေးမောင်တို့ အုပ်စုက ကော်မရှင် ကိုရော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုပါ ရှူးရှူးရှဲရှဲနှင့် ရမ်းဝှေ့ သဖြင့် နွားကု ဆရာ အေးမောင်တို့ အုပ်စုမှ လူရမ်းကား များကို အလိုလိုက်ကာ ပြန်ပြီး အနိုင် ပေးခဲ့သည်။
ရတပ ဦးဆောင်၍ “ပစ္ဆိမ ရပ်ဝန်း” ကဲ့သို့ အစွန်းရောက် မဂ္ဂဇင်းဖြင့် လှုံ့ဆော်၊ ကျောက်နီမော် ကိစ္စ ကိုဖန်တီး၊ တောင်ကုတ်မှာ (၁၀) လောင်းပြိုင် သတ်၊ ထို့နောက် ရခိုင် ပြည်အနှံ့ မွတ်စလင် များကို မီးလောင် တိုက်သွင်း ခဲ့သည်။ ရတပ ရခိုင်များ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် များအလား ရိုင်းစိုင်း ဖျက်ဆီး သည်ကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက လွှတ်ထား ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာများ၊ ပြည်ပ RFA, DVB, VOA, BBC မြန်မာ ပိုင်း အစီအစဉ် များမှ မျက်ကန်း မျိုးချစ်များက ရခိုင်များ၏ ထိုသို့ ရိုင်းစိုင်းမှုကို ၀ိုင်းပြီး အားပေး အားမြှောက် ပြုခဲ့သည်။
“ရခိုင် ပဋိပက္ခ” သည် ရတပ နွားကု ဆရာ အေးမောင်တို့၏ လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်သို့ သုံးသပ်ချက် စာတမ်းနှင့် တကွ လက်မှတ် ရေးထိုး သ၀ဏ်လွှာ ပို့သောအခါ နွားကု ဆရာ အေးမောင် တို့အုပ်စုက လွှတ်တော် ခန်းမထဲမှာ နွားရိုင်းအုပ် ၀င်သည့်နှယ် ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး သမ္မတနှင့် သမ္မတရုံး ၀န်ထမ်းများကို တက်နင်း မတတ် ၀ိုင်းအုံ ဆဲရေး တိုင်း ထွာ ရမ်းပြ ခဲ့သည်။ ထိုအခါ သမ္မတရုံးက သိက္ခာမဲ့ စွာပင် “သုံးသပ်ချက် စာတမ်းသည် သမ္မတ လက် မှတ် ရေးထိုး ပို့ပေးသည့် စာမဟုတ်ကြောင်း၊ မှားယွင်း သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း” ပြောပြီး သုံးသပ်ချက် စာ တမ်းကို ပြန်ရုပ်သိမ်း ခဲ့သည်။ ရခိုင် အရိုင်းများကို ထိုမျှအထိ သရမ်းခွင့် ပေးခဲ့သည်။
နွားကု ဆရာအေးမောင်တို့ မာန်ဖီတိုင်း တွန့်ဆုတ်၍ သွားတတ်သော သမ္မတက အဆိုပါ နွားကု ဆရာ အေးမောင်နှင့် ပုလင်းတူ ဗူး စို့ဖက် ဦးအေးသာအောင် တို့ကို “ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်” ထဲဝင် သရမ်း ခွင့်ပေးထား ပြန်သည်။ ကော်မရှင်ထဲ ရောက် လျှင်ရောက် ချင်း ထိုအရိုင်း တစ် ရှဉ်းသည် စပိန် နွားရိုင်း ကဲ့သို့ နီနီမြင်တိုင်း ရမ်းဝှေ့ လေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အမှန်တ ရား ထောက်ပြ သူ နှစ် ဦးကို ကော်မရှင် ပြင်ပသို့ တွန်းဝှေ့ ပစ်ခဲ့ လေသည်။ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဆိုသော်လည်း အသေ အချာ ဘာမှ မစုံစမ်း၊ (၈) လကျော် အချိန်ဆွဲ ခဲ့သော်လည်း အမှန် တကယ် အခင်း ဖြစ်ပွား ရာ နေရာများ သို့မသွား၊ အမှန် တကယ် ထိခိုက် နစ်နာသူ များနှင့် မတွေ့၊ မုသား ၀ါဒီ အာဏာပိုင် များနှင့်သာ သွားတွေ့သည်။ သူတို့ စေရာသာ သွားခဲ့သည်။ ရွာလုံးကျွတ် နီးပါး အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ခံရသော မြောက်ဦး မြို့နယ်မှ ယိုင်သည်ရွာ သို့ဆိုလျှင် ရောက်ပင် မရောက်။ မည်သူ မည်မျှ နစ်နာသည်ကို အသေ အချာ မလေ့လာ၊ ခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာ တစ်မျိုး သွေးရူး သွေးတန်း ပြောသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ကို အကာ အကွယ် ပေးရန်၊ ဘာသာတူ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များ၏ ရာဇ၀တ်မှု များကို ဖုံးဖိရန်၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ကမန် များ၏ နစ်နာချက်များ မပေါ်လွင် စေရန် အားထုတ် နေသည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာ ဖြစ်နေသည်။ ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ သုတေသန အဖွဲ့ ဆိုသည် တို့မှာလည်း အများ အားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ များအား ချောက်တွန်းသော မေးခွန်း များကိုသာ မေးမြန်း သွားခဲ့ သည်။ ခြုံ၍ ပြောရ လျှင် အဆိုပါ ကော်မရှင်သည် ဘာမှ ဟုတ်တိ ပတ်တိ မစုံစမ်းသော စုံစမ်းရေး ကော်မ ရှင် ဖြစ်ပြီး ရခိုင် တစ်ရှဉ်း ကြိုးဆွဲရာ ကသော ရုပ်သေး အဖွဲ့တစ်ခု သာဖြစ်သည်။
လွှတ်တော် အသီးသီး မှာလည်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အသီးသီးက နွားကု အေးမောင်တို့ အုပ်စုကို စိတ်ကြိုက် ရမ်းကားခွင့် ပေးထားသည်။ ရခိုင် ပဋိ ပက္ခ အကြောင်း ဆွေးနွေးရာ ရတပ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးက ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်းပင် “ကုလား တွေကို သုတ်သင်ရာမှာ ဗမာတွေ ၀င်ကူတာ အားမရလို့ ရခိုင် တွေက ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ အပြတ် ချတာ” ဟုဦးရွှေမန်း ကိုတိုင်တည်ပြီး ရမ်းခဲ့သည်။ တဖန် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ကလည်း နွားကု အေးမောင်အား ကုလား ကုလား ဟူသော အသံ ပဲ့တင် ခတ်နေသော “ရိုဟင်ဂျာ မျိုးဖြုတ် စီမံကိန်း” တစ်ခုကို တင်ပြ စေ၍ ရိုင်းစိုင်း ခွင့်ပေး ခဲ့သည်။ ဦးရွှေမန်းက နွားကု အေးမောင်၏ ရမ်းကား အုပ်စုဝင် ဦးမောင်ညိုအား “မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သမိုင်းဝင် ကုလား ရှိသလား”၊ ဒေါ်ခင်စောဝေအား “မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ ရှိသလား” ဆိုသော မေးခွန်း များကို မေး ခွင့် ပြုပြီး အကျိုး အကြောင်း ဖော်ပြချက်တွင် အခြား လူမျိုး တစ်မျိုးအား စော်ကားသော၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အနေဖြင့် မပြော အပ်သော ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းသည့် စကား များကို ပြောဆို ခွင့် ပေးခဲ့ လေသည်။
တောင်ကုတ်တွင် ရတပ နွားကု အေးမောင်တို့ အုပ်စု၏ (၁၀) လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရန် ပထမ ရခိုင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တစ်ခု ဖွဲ့ခဲ့သော်လည်း မည်သည့် အစီရင်ခံစာ မျှမထုတ်ပြန်ခဲ့၊ ဘာ မှ ဖော်ထုတ် အရေးယူ ခြင်းမရှိခဲ့။ ကော်မရှင် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့် ဆိုသူက ရခိုင် နွား ကု အေးမောင် တို့ကို ဖြုံနေပုံ ရသည် (သို့မဟုတ်) သူတို့နှင့် ပုလင်းတူ ဗူးစို့ဘက် ဖြစ်နေ ပုံ ပေါ် သည်။ ယနေ့တိုင် ထိုရခိုင် လူရမ်းကား များကို ဆန့်ကျင်၍ တစ်လုံး တစ်ပါဒ မျှမဟသေး။ ယခု ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ထားဆဲ အချိန်၌ပင် ရခိုင် အစွန်းရောက် များအား ထောင်သောင်း ချီစုရုံး၍ သောင်းကျန်း ရမ်းကား ခွင့်ပြု နေဆဲ ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ မွတ်စလင်များ အပေါ် တိုက်ခိုက် ရမ်းကား ခွင့်ပြုနေ ဆဲရှိ သည်။ နွားကု ဆရာ အေးမောင်၊ သမိုင်းလိမ် ပညာရှင် ဒေါက်တာ အေးချမ်း၊ ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးဇော်အေးမောင်၊ ဦးအောင်မြကျော်၊ ဦးဝိရသူ တို့ရွက်ကုန် ဖွင့်၍ မွတ်စလင်များ အပေါ် ရမ်းကားခွင့် ရနေဆဲ ရှိသည်။ ယခု ထွက်မည် ဆိုသည့် ဒုတိယ “ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်” ၏နောက်ဆုံး အစီရင် ခံစာသည် အထက်ပါ နွားကု အေးမောင်တို့ ရမ်းကားမှု၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုမှ လွတ်ကင်း ဖွယ်မရှိ။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နွားကု အေးမောင်တို့ အုပ်စုအား မွတ်စလင် များအား ရမ်းကားရန် လွှတ်ထား လေပြီ။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ “နွား” သရမ်းကြီး လွတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
(ဆောင်းပါး ရှင်၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်)
This entry was posted on March 26, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရမည်းသင်းမြို့၊ ရွာတန်းတိုက်နယ်၌ လူစုလူဝေးဖြင့် လာရောက်၍ နေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီး
“The Message Of Islam အပိုင်း ၁” →